အသက်အငယ်ဆုံး Winner တစ်ယောက်ပေါ်ထွက် လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ Myanmar Idol
အသက်အငယ်ဆုံး Winner တစ်ယောက်ပေါ်ထွက် လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ Myanmar Idol
31 Jul 2018 . 12:28 PM
ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက Top3ကို ပါဝင်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပျော်ရွှင်ရကြောင်းကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ အခုလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့အတူတူယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထွက်သွားရတာကိုလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
top3တဲ့ အိပ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတော့မယ်
ကျေးဇူးများး့းကြီးများးးကြီးတင်ပါတယ် အများကြီးးလဲချစ်ပါတယ် ဒီကျေးဇူးတွေမမေ့ပါဘူးဗျာ
တယောက်ချင်းဆီတိုင်းကို reply မပြန်နိုင်တာလဲခွင့်လွှတ်ပါနော် ….
top3ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကြိုးစားသွားပါ့မယ်
မောင်ချိုဟာ Myanmar Idol Season3မှာ အသက်အငယ်ဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူက အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လို့လည်း အမေနဲ့မတူတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေနဲ့မောင်ချိုကို တွေ့ရမှာပါလို့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲပြောလေ့ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ချမ်းမြေ့မောင်ချိုဟာ အားပေးသူပရိသတ်တွေ အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်သလို အသက်ငယ်တာကတစ်ကြောင်း မိန်းကလေးအဆိုရှင်ဖြစ်တာတစ်ကြောင်းမို့ ပရိသတ်ရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အထူးရရှိထားသူတစ်ဦးလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျန်ရှိနေတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်သုံးဦးအနက်မှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မောင်ချိုပဲ Winner ဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ အသဲယားစရာပါ။ ကျန်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်နဲ့ ဇော်ကြီးတို့ကလည်း ပရိသတ်တွေအသီးသီးရှိကြသူတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်သူက Winner ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကတော့ အားပေးသူပရိသတ်ရယ် သူတို့တွေရဲ့  ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုပဲ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit:ChanMyae MgCho Facebook
အသကျအငယျဆုံး Winner တဈယောကျပျေါထှကျ လာနိုငျဖှယျရှိတဲ့ Myanmar Idol
ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုက Top3ကို ပါဝငျသှားတာနဲ့ပတျသကျလို့ ပြျောရှငျရကွောငျးကို သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာ အခုလိုဖျောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူနဲ့အတူတူယှဉျပွိုငျကွတဲ့ သူငယျခငျြးတှထှေကျသှားရတာကိုလညျး စိတျမကောငျးဖွဈတယျဆိုတာကိုဖျောပွထားပါတယျ။
top3တဲ့ အိပျမကျတှတေကယျဖွဈလာတော့မယျ
ကြေးဇူးမြားး့းကွီးမြားးးကွီးတငျပါတယျ အမြားကွီးးလဲခဈြပါတယျ ဒီကြေးဇူးတှမေမပေ့ါဘူးဗြာ
တယောကျခငျြးဆီတိုငျးကို reply မပွနျနိုငျတာလဲခှငျ့လှတျပါနျော ….
top3ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့လိုကျအောငျကွိုးစားသှားပါ့မယျ
မောငျခြိုဟာ Myanmar Idol Season3မှာ အသကျအငယျဆုံး ပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျဖွဈပွီး မိခငျဖွဈသူက အဆိုတျောတဈဦးဖွဈပမေယျ့လို့လညျး အမနေဲ့မတူတဲ့ ပုံစံမြိုးတှနေဲ့မောငျခြိုကို တှရေ့မှာပါလို့ ပရိသတျတှကေို အမွဲပွောလရှေိ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။
ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုဟာအားပေးသူပရိသတျတှေ အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျတဈဦးဖွဈသလို အသကျငယျတာကတဈကွောငျး မိနျးကလေးအဆိုရှငျဖွဈတာတဈကွောငျးမို့ ပရိသတျရဲ့ခဈြခငျမှုကို အထူးရရှိထားသူတဈဦးလို့လညျး ပွောလို့ရပါတယျ။ ကနျြရှိနတေဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျသုံးဦးအနကျမှ မိနျးကလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ မောငျခြိုပဲ Winner ဖွဈမလားဆိုတာကတော့ အသဲယားစရာပါ။ ကနျြနှဈယောကျဖွဈတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျနဲ့ ဇျောကွီးတို့ကလညျး ပရိသတျတှအေသီးသီးရှိကွသူတှဖွေဈတဲ့ အတှကျ နောကျဆုံးမှာ ဘယျသူက Winner ဖွဈမလဲ ဆိုတာကတော့ အားပေးသူပရိသတျရယျ သူတို့တှရေဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုတှကေိုပဲ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုရဦးမှာဖွဈပါတယျ။